Feeding Tube Procedure (အရေပြားမှဖောက်ကာအစာအိမ်အတွင်းသို့ အစာပိုက်သွင်းခြင်း) - Hello Sayarwon
Feeding Tube Procedure (အရေပြားမှဖောက်ကာအစာအိမ်အတွင်းသို့ အစာပိုက်သွင်းခြင်း)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ခွဲစိတ်ကုသမှုများ » Feeding Tube Procedure (အရေပြားမှဖောက်ကာအစာအိမ်အတွင်းသို့ အစာပိုက်သွင်းခြင်း)
Feeding Tube Procedure (အရေပြားမှဖောက်ကာအစာအိမ်အတွင်းသို့ အစာပိုက်သွင်းခြင်း) ကဘာလဲ။
အရေပြားမှဖောက်ကာအစာအိမ်အတွင်းသို့ အစာပိုက်သွင်းခြင်းဆိုတာ ဘာလဲ။
အရေပြားမှဖောက်ကာအစာအိမ်အတွင်းသို့ အစာပိုက်သွင်းခြင်းသည် အစာပိုက်အား အရေပြာကိုဖောက်ကာ အစာအိမ်ဆီသွင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုမှသာ လိုအပ်သည့် အဟာရနှင့်ရေများကို ထည့်သွင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အရေပြားမှဖောက်ကာအစာအိမ်အတွင်းသို့ အစာပိုက်သွင်းခြင်းကို ဘာကြောင့်လုပ်ရသလဲ။
ဤနည်းလမ်းအား အစာမျိုရန်ခက်ခဲသည့် လူနာများတွင် အသုံးပြု၏။ ထို့ကြောင့် လိုအပ်သည့်အာဟာရများကို ရရှိနေစေရန် သမားတော်မှညွှန်ကြားပါလိမ့်မည်။
အရေပြားမှဖောက်ကာအစာအိမ်အတွင်းသို့ အစာပိုက်သွင်းခြင်းရဲ့ အန္တရာယ်တွေက ဘာတွေလဲ။
အစာပိုက်ထည့်ခြင်းသည် ရိုးရှင်းသည့်ခွဲစိတ်မှုတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ သို့သော် ရှုပ်ထွေးသည့်အခြေအနေများတွင်သာ လုပ်ရန်ညွှန်ကြားပါသည်။ အစာပိုက်သည် အခြေအနေတိုင်းတွင် အကူအညီမရပါ။ နောက်ဆုံးအဆင့်စိတ်ရောဂါများ သို့မဟုတ် ကင်ဆာများလို ရောဂါများတွင် အသက်ကိုဆွဲဆန့်မထားနိုင်သလို ပြန်ကောင်းစေမည်လည်း မဟုတ်ပါ။
နှာခေါင်းပေါက်မှ အစာပိုက်ထည့်ကာ ကျန်းမာရေးပြုစုသူများမှ အစာနှင့်ရေများ ထည့်လို့လည်း ရနိုင်ပါသည်။
အစာပိုက်အား ဗိုက်ခွဲပြီး အစာအိမ်ထဲသို့ တိုက်ရိုက်ထည့်နိုင်ပါသည်။ ထိုပြင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူများမှ အဟာရနှင့် အရည်များကို သွေးကြောထဲသို့ တိုက်ရိုက်သွင်းနိုင်ပါသေးသည်။
တခြားခွဲစိတ်မှုများကဲ့သိုပင် အန္တရာယ်များ ရှိနိုင်၏။ ထိုအန္တရာယ်များ သင့်ကိုဘယ်လောက်သက်ရောက်နိုင်သည်အား ဆရာဝန်နှင့်ဆွေးနွေးပါ။
ဘယ်ခွဲစိတ်မှုမဆို ဖြစ်နိုင်သည့်နောက်ဆက်တွဲများမှာ မေ့ဆေးထုံးဆေးအား မမျှော်လင့်ပဲ တုန့်ပြန်ခြင်း၊ သွေးထွက်လွန်ခြင်း သို့မဟုတ် သွေးခဲခြင်း (ခြေအတွင်းသွေးပြန်ကြောများ သွေးခဲခြင်း DVT) တို့ ဖြစ်၏။
အစာမစားခြင်းသို့မဟုတ် ဆေးရပ်ခြင်းတို့ကဲ့သို့ မခွဲစိတ်မီဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည်များအား လိုက်နာခြင်းဖြင့် နေုာက်ဆက်တွဲအန္တရာယ်များကို လျော့ချနိုင်ပါသည်။
အရေပြားမှဖောက်ကာအစာအိမ်အတွင်းသို့ အစာပိုက်သွင်းခြင်း၌ဖြစ်တတ်သော အန္တရာယ်တစ်ချို့မှာ – အစာပိုက်အနေအထား ပျက်သွားပြီး အစာအိမ်အတွင်းသွင်းသော အစာရည်များ ဗိုက်ခေါင်းထဲသို့ ယိုကျခြင်းနှင့် အစာပိုက်ပြုတ်ထွက်ခြင်းတို့ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
အရေပြားမှဖောက်ကာအစာအိမ်အတွင်းသို့ အစာပိုက်သွင်းခြင်းအတွက် ဘာတွေပြင်ထားရမလဲ။
ဘယ်အချိန်မှာ အစားအသောက် ရပ်ထားမည်ဆိုခြင်းကဲ့သို ညွှန်ကြားချက်များအား မခွဲစိတ်ခင် သင့်ကိုညွှန်ကြားပါလိမ့်မည်။ ပိုက်မသွင်းခင် ၈ နာရီလောက်အလိုက အစားအသောက်ရပ်ထားရန် ဆရာဝန်မှပြောပါလိမ့်မည်။
အရေပြားမှဖောက်ကာအစာအိမ်အတွင်းသို့ အစာပိုက်သွင်းနေစဉ် ဘာဖြစ်နိုင်မလဲ။
သင့်လျော်ပါက ဝမ်းတွင်းမှန်ပြောင်းကျွမ်းကျင်သူမှ သင့်စိတ်ပြေလျော့စေရန် စိတ်ငြိမ်ဆေးပေးပါလိမ့်မည်။
အရေပြားမှဖောက်ကာအစာအိမ်အတွင်းသို့ အစာပိုက်သွင်းခြင်းသည် ၁၅ -၂၀ မိနစ်ကြာတတ်သည်။ ကွေးဆန့်နိုင်သည့် မှန်ပြောင်းအား လည်ပင်းမှ အစာအိမ်ထဲသို့ ထိုးသွင်းပါမည်။ မှန်ပြောင်းကျွမ်းကျင်မှ မှန်ပြောင်းအကူအညီနှင့် အစာပိုက်ကိုသွင်းမည်ဖြစ်သည်။
မှန်ပြောင်းကျွမ်းကျင်မှ ဗိုက်နံရံတွင် အပေါက်သေးတစ်ခုကို ခွဲစိတ်ပါမည်။ ထို့နောက် ပိုက်အား အစာအိမ်ထဲမှတစ်ဆင့် ဗိုက်တွင်ပေါက်ထားသောအပေါက်မှ အပြင်ကိုထုတ်မည်ဖြစ်သည်။ ပိုက်တွင် အစာအိမ်၌ မြဲနေစေမည့် အထိန်းပါသည်။ ထိုအထိန်းကြောင့် အစာအိမ်အပြင်ဖက်ကို ထွက်မလာနိုင်ပါ။
အရေပြားမှဖောက်ကာအစာအိမ်အတွင်းသို့ အစာပိုက်သွင်းခြင်းပြီးနောက် ဘာဖြစ်နိုင်မလဲ။
သင့်အား စိတ်ငြိမ်ဆေးပေးထားပါက တစ်နာရီအတွင်း ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ နာရီအနည်းငယ်အထိ ဗိုက်ကယ်နေသလိုခံစားရနိုင်သော်လည်း အလိုလိုသက်သာသွားပါလိမ့်မည်။ တစ်ပတ်နှစ်ပတ်အတွင် ပုံမှန်လှုပ်ရှားမှုများကို ပြန်လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ အောက်တိုဘာ 28, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း နိုဝင်ဘာ 17, 2017
Feeding Tube Placement. http://www.webmd.com/digestive-disorders/feeding-tube-placement?page=1#1. Accessed July 16, 2016.
PEG Feeding Tubes - Indications and Management. http://patient.info/doctor/peg-feeding-tubes-indications-and-management. Accessed July 16, 2016.
Percutaneous Endoscopic Gastrostomy (PEG) Tube Placement. http://emedicine.medscape.com/article/149665-overview. Accessed July 16, 2016.
Percutaneous Endoscopic Gastrostomy (PEG). http://my.clevelandclinic.org/health/treatments_and_procedures/hic-percutaneous-endoscopic-gastrostomy-PEG. Accessed July 16, 2016